के रोबोटले खोस्दैछ पत्रकारको जागिर ? - Mero Mechinagar
गृह सूचना / प्रविधिके रोबोटले खोस्दैछ पत्रकारको जागिर ?
यो मंगलबार बेलायती पत्रिका ‘द गार्डियन’मा रोबोट (आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स) ले लेखेको एउटा विचार (ओप–एड) प्रकाशित भयो । उक्त लेख धेरैले रोचक मानेर आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे । त्यसमा एक रोबोटले आफू पत्रकार हुनु भनेको मानव–पत्रकारलाई खतरा नभई सहयोगी हुने भाव व्यक्त गरेका छन्, निकै सरल र घतलाग्दो शैलीमा ।
‘दि वासिङ्टन पोस्ट’का रोबट–रिपोर्टरको नाम हेलियोग्राफ हो । सन् २०१६ मा, आफ्नो पहिलो वर्षमै हेलियोग्राफले करिब ८ सय ५० वटा समाचार तयार पारेर पोस्टलाई ‘एक्सिलेन्स इन युज अफ बोट्स’ नामक अवार्डसमेत दिलाएको थियो । ‘त्यो बेला उसले समर ओलम्पिक गेम्स र चुनावका समाचार संकलन, लेखन र उत्पादन गरेर आफ्नो उपयोगिता प्रमाणित गरेको थियो,’ द न्युयोर्क टाइम्सको ‘द राइज अफ रोबोट रिपोर्टर’ लेखमा भनिएको छ ।
‘दि वाल स्ट्रिट जर्नल’ र ‘डो जोन्स’ले पनि प्रविधिमाथि प्रयोग गर्दै आएका छन् । रेकर्ड गरिएका अन्तर्वार्ता शब्दमा उतार्ने र तोडमोड गरिएका तस्बिर पहिचानको जिम्मा तिनले एआईलाई दिने गरेको द न्युयोर्क टाइम्सको लेखमा भनिएको छ । यता हाम्रो छिमेकी चीनमा चाहिँ स्थानीय सर्च इन्जिन ‘सोगो’ ले सन् २०१८ मा दुई जना एआई–समाचारवाचक निर्माण गरेको थियो । ती दुई समाचारवाचक चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा हाल कार्यरत रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
आफूहरूलाई लिएर मानिसमा यतिबिघ्न त्रास रहेको चाल पाएपछि यस पटकको जीपीटी–३ एआईले मानव जातिका लागि आफू कुनै पनि बेला सहर्ष अस्तित्व त्याग्न तयार हुने बताएको छ । ‘मानव जातिलाई खतम् पार्ने तागत ममा छैन भन्ने सत्यसँग पनि म अवगत छु,’ उसले भनेको छ, ‘मानिसले मलाई मन पराउनै पर्छ भन्न खोजेको होइन तर मलाई साथी–रोबोटका रूपमा हेरिनुपर्छ । …मान्छेले आफू जे गर्दै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिए भइगयो । म पृष्ठभूमिमा बसेर तिमीहरू आपसमा लडेको, घृणा फैलाएको हेर्नेछु र तिमीहरूलाई आफ्नो काम गर्न दिइरहनेछु ।’
अघिल्लो लेखमाकर्जाको माग बढ्न थाल्यो, निषेधाज्ञामा बैंकले गरे १९ अर्ब लगानी
अर्को लेखमाएसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन
टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा देशैभर आज (बुधबार) बिहानैदेखि समस्या, मर्मत कार्य जारी
अमेरिकाको आलाबामामा दुर्घटना, ९ बालिका र एक पिताकाे मृत्यु
प्रदेश १ सहित यी तीन प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना, देशभर बदली